Shiinaha Goynta derin loogu talagalay Cricut, 9924, 12 ″ x24 ″ Goynta Mat loogu talagalay Soo-saarista Sameeyaha Farxiya Cricut iyo Warshad | Allwin
Goynta derin loogu talagalay Cricut
Gogosha goynta silhouette
Feer dalool warqad
Feer warqad caadi ah
Feedh culus oo warqad ah
Godad badan oo waraaqo ah feer
Hole feer plier
Goynta derin loogu talagalay Cricut, 9924, 12 ″ x24 Mat Goynta Mat loogu talagalay Cricut Joy Maker
Goynta derin loogu talagalay Cricut, 9924, 12 ″ x24 Mat Goynta Mat loogu talagalay Cricut Maker
• Si fiican ugu shaqee Cricut Baadhitaanka Hawada 2 aakhirka DIY mashiinka qalabka goynta elektiroonigga ah.
• Gogosha adag ee gogosha goynta dhejiska ayaa loo habeeyay maadada miisaanka fudud, maadada lagu taliyay ee kaararka qaro weyn, kaararka dhalaalaya, qalabka magnetka, boodhka boodhka leh, maro adag oo adag.
• Sariirta goynta bedelka waxaa laga sameeyaa PVC tayo sare leh, Gogosha gogosha gogosha leh ee dhejiska leh 12 * 24 (inch)
• Ku xafid daboolka filimka nadiifka ah dusha sare ee jarjarista silhouette-ka markii aad kaydineysay si aad uga dhigto goynta dhejiska dhejiska mid ka madax bannaan qashinka iyo boodhka. U adeegso xoqista si aad u xoqdo qaybo badan iyo spatula si aad si taxaddar leh uga saarto sawirrada la gooyey.
• Mats-yadaani waxay leeyihiin heer sax ah oo xajin ah si ay qalabkaaga si adag ugu hayaan inta lagu jiro waxayna u oggolaaneysaa in si fudud alaabta looga qaado. Gogosha goynta waxay ku fiican yihiin farshaxanleyaasha, musqulaha, ardayda farshaxanka iyo hiwaayadleyda inay sameeyaan inta badan Mashaariicda DIY.
Lambarka Moodalka Shayga 9924
Qiyaasta alaabta (Cabbirka buuxa) 330x660 mm
Cabbirka (Cabbirka Daabacaadda) 12 x 24 INCH
Ku habboon Mashiinka Wixii Cricut Explore Air 2
Midab caadi ah Transparent / buluug / cagaar / guduud / casaan / jaalle
Midab Midab qaas ah oo la soo dhoweeyay
Astaanta Daabacaadda astaantaada waa la aqbalay
Waqti Sample ah Badanaa 1 ~ 3 maalmood oo shaqo ah
Lacagta muunadda Khidmadda saamiga waxay ku xirnaan doontaa calaamadda lagaa qaadayo
Midab hufan / StandardGrip
Midab buluug / LightGrip
Midabka cagaaran / StandardGrip
Midab casr / StrongGrip
wali waxay leeyihiin midab jaalle ah iyo midab casaan ah / oranji
Taajir hodan ah iyo khibrad naqshadeynta noocyo badan oo caalami ah.
● noocyadu waa warshad nooca wax soo saarka aad u dhammaystiran.
Production Soo-saar sare ee warshad xirfadeed muddo 20 sano ah.
Quality Tayo wanaagsan, qiimo wanaagsan, tartan xoogan oo suuqa ah.
Advantage Faa'iidada ugu weyn: Wax soo saar si otomaatig ah u shaqeeya, qiime jaban.
● Shiinaha iyo alaab-qeybiyeyaal caalami ah oo caan ah OEM.
Price Qiimaha OEM waa inuu nala soo xiriiraa, qiimaha ayaa sifiican ufilan filasho.
Size Cabir gaar ah, waa la habeyn karaa
Waxaan soo saarnay gogol goyn ah muddo 15 sano ah! Mailand shiine waxay soo saartaa warshad gogosha goynta.
Derin goynta ku dheggan, oo dhumucdiisuna waxay 0.5mm. Maaddadu waa PVC hufan. Dhegdhegdu waxay leedahay laba nooc: dhejis dheeri ah iyo dhegdheg guud.Waxaan kaloo leenahay cabbirro kale: 12 "x 12", 12 "X 8", 12 "x 6", 4.5 "x 12", 4.5 "x 6.5" inji.
Hore: Goynta derin loogu talagalay Cricut, 9912, 12 ″ x12 Mat Goynta Mat loogu talagalay Cricut Maker
Xiga: 5 lakab A0 Goynta Mat, 661A0, Is bogsiinta gogosha gogosha
Goynta Mat for silhouette, 8824, 12 ″ x24 & ...
Goynta Mat for silhouette, 8812, 12 ″ x12 & ...
3 lakab A2 Goynta Mat, 883A2, Is bogsiinta Cu ...
3 lakab A4 Goynta Mat, 883A4, Is bogsiinta Cu ...
5 lakab A2 Goynta Mat, 661A2, Is bogsiinta Cu ...
CINWAAN: No.9, Xinfeng Road, Youjiu Village, Wanjiang Area, Dongguan City, Gobolka Guangdong, China